KBZ Bank ဥက္ကာငှ ကဘယ်သူလဲ ????? ~ SAI SENG SERK
Home » OTHERKNOWLEDGE » KBZ Bank ဥက္ကာငှ ကဘယ်သူလဲ ?????
KBZ Bank ဥက္ကာငှ ကဘယ်သူလဲ ?????
၁၉၉၆ ခုနှစ်ခန့်ဆီက မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း၌ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးက ကမ္ဘောဇဘဏ်ကို စတင်တည် ထောင်ခဲ့စဉ် ဖခင် နှင့် မိခင်ဖြစ်သူသာ ဦးစီးလုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်က ဇနီးဖြစ်သူမှာ ယင်းဒေသမှ ကျောင်းဆရာမတဦးဖြစ်ပြီး၊ ခင်ပွန်းသည်မှာလည်း ကုန်သွယ် ရေးနှင့် ကျောက်မျက် သတ္တု ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း မလုပ်ကိုင်မီအထိ စာသင်သည့် အလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့မှာတော့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးသာမက သမီးနှစ်ယောက်ပါ မိဘစီးပွားရေးကို ဝင်ရောက်လုပ် ကိုင်နေကြပြီဖြစ်ရာ ၎င်းတို့လုပ်ငန်းအားလုံးကို သူတို့ မိသားစုက လုံးလုံးလျားလျား ပိုင်ဆိုင်နေတော့၏။
သို့သော် ထိုအခြင်းအရာများသည် မျက်လှည့်ပြလိုက်သကဲ့သို့ရှိ၏။ ယနေ့၌မူ ဦးအောင်ကိုဝင်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်နန်းသန်းထွေး တို့သည် ကမ္ဘောဇ (KBZ) ကို အကြီးဆုံးဘဏ်အဖြစ် တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ဤတိုင်းပြည်တွင် အကြီးမားဆုံးသော ကုမ္ပဏီများထဲမှာ တခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်လျက်ရှိသည်။
KBZ လုပ်ငန်းစုက Air KBZ နှင့် Myanmar Airways International ဟူ၍ လေကြောင်းလိုင်း နှစ်လိုင်းကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင် နိုင်ခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ အိမ်ခြံမြေနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတို့ပါ ပါဝင်သည်။
သမီးနှစ်ယောက်ကို နိုင်ငံခြားပို့၍ စီမံခန့်ခွဲဘာသာရပ်သင်ယူစေကာ ယခုနှစ်တွင်ကျွမ်းကျင့်အဆင့် အမှုဆောင်အရာရှိ အဖြစ် တာဝန်ယူစေသည်။ ၎င်းမိသားစုသည် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သူတို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသစ်များတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် အတွက် စတော့ဈေးကွက်ရှိ ငွေကြေးများကို မြှင့်တင်ကောင်းမြှင့် တင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှတွင် နောက်ထပ်တိုးလာမည့် ကျားတကောင်အဖြစ်သို့ အရူးအမူးရောက်ချင် နေသည်ဖြစ်ရာ ပြည် တွင်းရှိ KBZ ကဲ့သို့လုပ်ငန်းမျိုးက နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ပေါင်တန်း ပြိုင်ဆိုင်နိုင် သည့် အဆင့်သို့ မြှင့်တင်နိုင်ရန်လိုသည်။
KBZ ဘဏ်တွင် အမှုဆောင်အရာရှိများအဖြစ်တာဝန်ယူထားသည့် သမီးနှစ်ဦး Forbes
“ကျမတို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ အကောင်းဆုံးဘဏ်ဖြစ်ချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာပါ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ချင်တာပါ” ဟု ဒုတိယသမီးဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းခမ်းနောင့်က ပြောကြားသည်။
KBZ သည် တိုင်းပြည်၏ ဘဏ်အပ်ငွေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လက်ခံထားရှိပြီး ယင်းပမာဏသည် တိုင်းပြည်ပွင့်လင်းလာစဉ် ကတည်းက ရရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ထိုင်း၊ မလေးရှားနှင့် စင်ကာပူတို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ လာရောက်ဖွင့်လှစ်သည့် ပထမဆုံးဘဏ်အဖြစ် KBZ က ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဈေးကွက်တွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အရေးပါရုံမကဘဲ ပြည်ပ ရောက် မြန်မာအလုပ်သမားထံမှ ငွေလွှဲမှုများကိုပါ စုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်မတ်လတွင် ဆူမီတိုမို မစ်ဇူရီ ဘဏ်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် အရေးပါသည့် သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အဆီးအတားမရှိ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း KBZ ကကြေညာသည်။
ယင်းသို့ ကြေညာနိုင်ခြင်းမှာ အမေရိကန်က မြန်မာကို ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်ထားခြင်းမှ ဖြေလျော့ပေးပြီးသည့် နောက်ပိုင်း ယခင်ကစိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခု အကောင်အထည်ပေါ်လာခြင်းဟု ဆိုနိုင်သည်။
အများစုပိုင်ဆိုင်မှုတခုက တိုင်းပြည်၏ တတိယမြောက် အကြီးဆုံးအာမခံဈေးကွက်ကိုလည်း အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ထိန်း ချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီး၊ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ထိပ်တန်းမှရှိကာ ပရီမီယံ နှစ်စဉ်တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။
KBZ သည် အကြွေးဝယ်ကတ် (Credit Card)ကဲ့သို့ အခြားဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှုများတွင်လည်း ပြည်တွင်း၌ ထိပ်တန်း မှ ဦးဆောင်နေသည်။ အကဲခတ်သမားများက KBZ ၏ အစီအစဉ်များ၊ စီမံခန့်ခွဲများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ချီးကျူးကြသည်။
“သူတို့ဟာ မြန်မာပြည်မှာ အရေးကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အရင်းအမြစ်၊ အလုပ်အကိုင် ရရှိရေး၊ ပွင့်လင်းမြင် သာမှုနဲ့ စီးပွားလက်တွေ့နယ်ပယ် စတာတွေမှာ ရှေ့ရောက်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင် KBZ ဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ် အောင် တကယ့်ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးက မှတ်ချက်ချသည်။
၎င်းဘဏ်သည် ဝန်ထမ်းပေါင်း နှစ်သောင်းကျော်ကို အလုပ်ပေးထားနိုင်ပြီး တိုင်းပြည်ကို အကြီးမားဆုံး အခွန်ထမ်းသူ အဖြစ်လည်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းနီးပါး အခွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
KBZ လုပ်ငန်းစု၏ ဝန်ထမ်းပေါင်း ရှစ်သောင်းအနက် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများက လေးချိုးတစ်ချိုးမျှရှိပြီး၊ အတွင်းစည်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် အခွန်တော်နှင့် အမြတ်တို့၏ အချက်အလက်ကိန်းဂဏန်းများကို ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိပေ။
ဒေါ်မာလင်း နန်းခမ်းနောင့်မှာ ၂၆ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး၊ အမဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းလိုင်ခမ်းမှာ အသက် ၂၉နှစ်ရှိကာ နှစ်ဦးလုံးမှာ ကမ္ဘောဇ ဘဏ်အုပ်စု (KBZ)၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာများအဖြစ် တာဝန်ယူထားသလို ကမ္ဘောဇဘဏ် လီမိတက်၏ ဒုတိယ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်များအဖြစ်လည်း ဖြစ်သည်။
သူတို့ကို မြန်မာ လူငယ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များလှိုင်းလုံးတခု၏ ကြယ်ပွင့်နှစ်ပွင့်အဖြစ် မှတ်ယူကြသည်။
နန်းလိုင်ခမ်းသည် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့စေရန် စွမ်းဆောင်မှုအပိုင်း ပြောကြားပေးရန် နိုင်ငံခြားမှ စီးပွားရေး လူငယ်ညီလာခံတက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသည်။ မာလင်းသည် လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားတတ်သူတဦးကဲ့သို့ သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီး နိုင်ငံခြားဝန်ဆောင်မှုများတွင် တက်လမ်းရှိသူအဖြစ် မျှော်မှန်းထားသည်။
သူတို့ ညီအစ်မနှစ်ဦး၏ ဂုဏ်သတင်းမှာ မွှေးပျံနေပြီး၊ KBZ ရုံးသို့ အလည်တခေါက်သွားခြင်းဖြင့် တစုံတခုသော ယုံကြည် စိတ်ချမှုအဟုန်ကို မြင့်တက်လာစေသလို ခံစားရသည်။
အမိမြေကို ပြန်လည်အကျိုးပြုမည့် သားကောင်းသမီးမွန်များ မွေးဖွားပေးရန် ဥခွံမှဖောက်ထွက်ရန် ရုန်းကန်ပေးသည့် ခွန်အားကိုလည်း ရရှိလိုက်သည်။ တောက်ပသည့်အနာဂတ်များကို မြင်ရသည်။
ညီမနှစ်ယောက်သည် မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်ကွန်ရက်ကို သုံးစွဲလျက် ဘဏ်ခွဲအသီးသီးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းသုံးစွဲသူ ဖောက်သည်များကို ပစ်မှတ်ထားသည့် ဒီဂျစ်တယ်မားကက်တင်းကိုလည်း ဖန်တီးနေကြသည်။
လူကြိုက်များသည့် Viber ဆက်သွယ်မှုမှလည်း အသံနှင့်သတင်းအချက်အလက်တိုများကို ဖြန့်ဝေ နေကြသည်၊ ဤ တိုင်းပြည်သည် ဆဲလ်ဖုန်းများဖြင့် အင်တာနက်သုံးစွဲခြင်းကို မကြာသေးမီ အချိန်အထိ ကန့်သတ်ခဲ့သော်ငြားလည်း အင်တာနက်လိုင်းမိသော ဖုန်းပေါ်မှ စကားပြောဆိုခြင်း များကတော့ ရိုးရှင်းနေဆဲရှိသည်။
KBZ သည် ၎င်းဝန်ထမ်းများ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် လူသားအရင်း အမြစ် (HR) ဌာနကို အထူးအာရုံစိုက်သည်။ ထို့အပြင် လူမှုကူညီရေးကိစ္စများအတွက်လည်း ငွေကြေး ကုန်ကျခံသည်။
သူတို့ တည်ထောင်ထားသည့် အနာဂတ်အလင်းတန်းဖောင်ဒေးရှင်းသည် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရေရရှိရေး စီမံကိန်းများ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့် ဒေသများတွင် ကူညီခြင်းဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အပိုင်း တွင်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပွဲတော်တွင် လွတ်လပ်သည့် လှုံ့ဆော်ရေးဇာတ်ကား များ၊ ဆင်ဆာမဲ့သတင်း ဓာတ်ပုံ ပညာ ရှေ့တန်းတင်ခြင်းအတွက် ဆွေးနွေးခြင်းစသည့်လှုပ်ရှားမှုများ အတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူထားသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် KBZ သည် တာဝန်သိလုပ်ငန်းများအတွက် မြန်မာစင်တာ(Myanmar Centre for Responsible Business)၏ နံပါတ် ၁ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။
ကမ္ဘောဇ၏ ပထမဆုံးလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ပတ္တမြားတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေးသည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက လူမသိသူမသိ လုပ်ကိုင်ပြီး ခိုးထုတ်နေသော လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအဖြစ် လန်ဒန်အခြေစိုက် ကမ္ဘာတလွှားစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။
၎င်းအဖွဲ့ကပင် KBZ သည် မိမိတို့ သုတေသနစစ်တမ်းအတွက် ဖွင့်ချပြရဲပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရှိ သည့် တခုတည်းသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးမှာ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် သစ်တောပြန်လည်ပျိုးထောင်ရေးနှင့် ခေတ်မီနည်းစနစ် သုံးစွဲရေးဘက် အာရုံစိုက်နေကြောင်း ကမ္ဘောဇမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ကျမတို့ကို တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့အတွက် တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောဆိုခြင်းခံရပါတယ်” ဟု သူမက ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘောဇ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်လည်း “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အစည်းအဝေးတက်ဖို့ ခေါ်ယူခြင်းခံရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ ဒါမှမဟုတ် ညှိနှိုင်းကြေးပေးတာမျိုး လုံးဝလက်မခံဖို့ မူဝါဒချထားပါတယ်” ဟု ရေးသားထားသည်။
၎င်းကျောင်းဆရာမိသားစုသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော် တောင်ကြီးတွင် ငွေချေးလုပ်ငန်းပုံစံမျိုးဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ KBZ ဆိုသည်မှာ ရှမ်းပြည်နယ် ဟူသော ပါဠိစကားလုံး ကမ္ဘောဇ ကို အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အောင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းအတွင်း တိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဘဏ် လုပ်ငန်းကိုပါ လုပ် ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့် ဦးအောင်ကိုဝင်းသည် သူ့လုပ်ငန်းကို KBZ ဟုအမည်တပ်ပြီးနောက် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအကုန်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်သို့ မိသားစုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ချိန်ဝယ် ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၄ ခုသာရှိသေးသည်။ ယနေ့တွင် ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၄၈၅ ဘဏ်ရှိလာခဲ့ပြီး ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ဘဏ်ခွဲ ၅၀၀ အထိ KBZ က မျှော်မှန်းထားသည်။
၎င်းမိသားစုသည် ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ ပျားပန်းခတ်များပြားနေသည့်ဘဏ် ရုံးချုပ် အဆောက်အဦ အပေါ်ဆုံးထပ်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ “နန်းကဘဏ်မှာပဲ အမြဲတမ်း အလုပ်လုပ်ချင် နေမိတာ။ အခုတော့ ကျမတို့ ညီမ နှစ်ယောက်စလုံး ဒီလုပ်ငန်းထဲ ဝင်လုပ်ပေးနေပြီလေ” ဟု နန်းက ပြောပြသည်။
“ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ တကယ့်ကို နောက်ဆုံးစည်းတစ်ခုပါပဲ။ ကျမတို့ ဘဏ်မှာပဲ ကြီးပြင်းကြတာပါ။ ကလေးဘဝတုန်းက ကျမတို့ ဘဏ်ထဲမှာပဲ နေပြီး Customer တွေကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီကတည်းက တစိတ် တပိုင်း ထိတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့” ဟု နန်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လူကုံတန်အသိုင်းအဝိုင်းမှ ကလေးများကဲ့သို့ပင် နန်းနှင့် မာလင်းတို့ကို နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ပို့လွှတ်၍ ပညာသင်စေ သည်။ နန်းသည် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးပညာကို စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်တွင် ဆည်းပူးခဲ့ရပြီး စီမံခန့်ခွဲ မှု မဟာဘွဲ့ကို ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်တွင် ဆက်တက်ခဲ့ရသည်။
တဖန် မာလင်းသည် လန်ဒန်ရှိ Imperial College စီးပွားရေးပညာကျောင်းတွင် စွန့်ဦးတီထွင်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့မရမီ ကာတာနိုင်ငံရှိ ဂျော့ခ်ျတောင်းတက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံခြားဝန်ဆောင်မှုတွင် လေးနှစ်တက်ခဲ့ရသေးသည်။ (အငယ်ဆုံး ညီမဖြစ် သူ ထရေစီနန်းမိုဟွမ်သည် အသက် ၂၁ နှစ်သာရှိသေးပြီး ဒေါက်တာဖြစ်ရန် ကျောင်းတက်နေဆဲဖြစ်သည်) ညီမနှစ်ယောက်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် မိဘများ၏ အမြင်စူးရှမှုအပေါ် ထပ်မံမြှင့်တင်ပေးသည်။
KBZ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ အသက် ၆၀ အရွယ်ရှိ မိခင်ကြီးထံမှလည်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပတ်သက်သမျှ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ် ချက်စကားကို ကြားရလေ့ရှိသည်။ “ဖေဖေက အင်မတန်မှ ခေတ်မီတာ။ သူ ကိုယ်တိုင် Facebook မသုံးပေမယ့် Facebook အကြောင်း ကျမတို့ထက် ပိုသိတယ်” ဟု နန်းက မှတ်ချက်ချသည်။
သူသည် မြန်မာပြည်သတင်းတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပဲ အချိန်ကုန်ဆုံးလေ့ရှိကြောင်း သူမက ဆက်လက်ပြောပြသည်။ “သူကလူပေါင်းစုံနဲ့ပေါင်းပြီး သတင်းစကားတွေ နားထောင်လေ့ရှိတယ်” ဟုဆိုသည်။
အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သူမတို့ကုမ္ပဏီက ပထမဆုံးစာရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ရွေးချယ်စရာက များပြားပြီး KBZ က ကတ်ပြားပေါင်းများစွာကို ကိုင်ထားသည်။ “ကျမတို့ဖေဖေက မဟာဗျူဟာချမှတ်သူပါ။ ဘယ်လုပ်ငန်းမှာမဆို ကျမတို့မှာ အစီအစဉ်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတောင် ဖေဖေတို့မေမေတို့ဆီမှာ အစီအစဉ်တခု ရှိခဲ့တာပါ” ဟု နန်းက ပြောပြသည်။
ဝꨓ်းꨡွꨀ်ꨲဝုꨲ ꨡမ်ꨲꨓꨓ် ꨕဝလုꨀ်ꨳꨁူꨉ် လုꨀ်ꨳပ်ꨮꨵ